Ogogo bajabule kakhulu umphakathi ubalekelela | Scrolla Izindaba
Ogogo bajabule kakhulu umphakathi ubalekelela
NgoMsombuluko, ugogo uMashudu Matamela ubengazi ukuthi ukudla kwakhe okulandelayo kuzoqhamuka kuphi.
Kodwa namuhla yena nomndeni wakhe wezingane ezine banokudla nogesi okuzobagcina isikhathi esingaphezu kwenyanga.
UGogo Mashudu Matamela, oneminyaka engama-78, wase-Halukhwa e-Thohoyandou, e-Limpopo nabanye ogogo abahlanu baqolwe imali yabo yesibonelelo eyi-R1,860 ngowesifazane owayethatha amakhadi abo akwa-Sassa esenga ezimithiyo ngokuthi ubabhalisela amaphasela okudla.
Ogogo baya kumholi wendabuko wendawo iNduna uTakalani Tshivhase, futhi abakwa-Scrolla.Africa bashicilela indaba mayelana nosizi lukaGogo Mashudu. Ngemuva kohambo logogo lokuya eNduneni uTshivhase, umkhandlu wendabuko wabanikeza amaphasela okudla. Banikele ngokudla namavawusha kagesi kubo bonke ogogo.
Usomabhizinisi wendawo uTakalani Ranwedzi unikele ngokudla okwengeziwe futhi wabuyisela imali eyebiwe kogogo.
“Ngaphandle kwale mali asiyilutho. Lokhu esikuthole namuhla kubuyise isithunzi sethu,” kusho ugogo Mashudu.
“Ngijabule kakhulu. Lokho esikwenzelwe induna yethu nosomabhizinisi kuzoshintsha izimpilo zethu ngokuphelele.”
UMnu uVictor Takalani woMkhandlu wasebukhosini i-Takalani uthe bathukile ngemuva kokuzwa ngokwenzekile kogogo.
“Sinqume ukwenza okuthile njengongenelelo lwesikhashana. Siyazi ukuthi imindeni eminingi incike kwizibonelelo futhi besingeke sikwazi ukubenza ukuthi balinde imali elandelayo yesibonelelo,” esho.
“Esingakufuni futhi ukuthi abafundi baphuthelwe ezifundweni zabo yingakho sibanikeze amavawusha kagesi.”
Uxwayise izakhamizi ukuthi ziqaphele zingathembi abantu ezingabazi kepha zidlulisele zonke izinkinga ehhovisi lomdabu.
UTakalani Ranwedzi, ophinde abe ngumfundisi uthe: “Asinayo imali eningi kodwa besingeke senze sengathi akwenzekanga lutho. Sinikela ngemali encane esinayo yokusula izinyembezi zabo nokuthi baqhubeke nezimpilo zabo.”